Dalka Jarmak Xisbiga Angela Merkel oo guul daro la kulmay
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel
Go'aankii ay qaadatay Angela Markel ee ugu ogolaatay in ku dhowaad hal milyan oo soo galooti ah lagu qaabilo jarmalka ayaa waxa ay u muuqataa in uu dhibaato u keenay xisbigeeda.
Natiijadii ka soo baxday doorashooyinkii dhacay axada ayaa waxa ay noqdeen kuwii ugu xumaa ee uu xisbigu ka soo hoyiyay caasimada Berlin. Waxay u muuqataa in xisbiga AFD ee iyagu diidan soo galootiga yahay kan sida aadka uga faa'iideystay doorashooyinkan waxa uuna markii ugu horaysay xubno ku yeelanayaa xisbigu 10 ka mid ah 16-ka aqal barlamaan ee jamarlka ku leeyahay goboladda dalkaasi.
Xisbigu waxa uu doonayaa in uu sii ballaariyo guushiisa oo uu guulo intan ka badan ka gaaro doorashooyinka guud ee la filayo in ay ka dhacaan dalka Jarmalka sanad soo socda.
Waxay u muuqataa in shacbiyadda angela Markel ay sii lumaysay tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay albaabada u furtay soo galootiga tirada badan ee ka soo baxsanaya colaadaha ka socda suuriya iyo meelo kale.
Xisbigeeda waxa uu helay wax ka yar boqlkiiba 17 doorashooyinka heer goboleedka ee ka dhacay caasimada Jarmalka ee Berlin, taasi oo micnaheedu tahay in xisbiga haatan ku qasbanaanayo in uu isaga baxo isbahaysigii heer goboleed ee uu kula jiray xisbiyada kale ee maamulka caasimada berlin.